Amy Fisher, 'Long Island Lolita'
Kushungurudza Utano uye Kutendeseka:
Amy Elizabeth Fisher akaberekwa musi waAugust 21, 1974. Mubhuku rake, "Amy Fisher: My Story," akanyora pamwe naSheila Weller, Amy akanyora kuti akatambura kushungurudzika kwevana mushure memumwe wemumhuri, kazhinji, achimuitira zvepabonde. Zvadaro, pazera remakore gumi nematanhatu, murume akashandira kubasa kumba kwake akamubata chibharo. Mumazuva ake achiri kuyaruka aive nekuita zvepabonde, pakupedzisira zvichiita kuti ave nepamuviri asingadiwi uye kubvisa pamuviri.
Kushungurudzwa kwaakatambura semucheche kwakaratidzika kunokurudzira hupombwe hwake, gare gare muupenyu.
Mavambo ehukama hwepabonde:
Amy akaonana naJohn Buttafuoco muna May 1991, paakaenda nemotokari yake kumotokari yake yekugadzirisa. Akatanga kushanyira muchitoro ndokutengesa Joey nguva dzose. Kukwezva kwake kwaari kwakakura. Musi waJuly 2, nemotokari yake mukugadzirisa, Joey akazvipira kumudyaira kumba kwake. Paaiva pamba pake, vaviri ava vakava nekutanga kuita zvepabonde kokutanga mumba make. Joey aiva nemakore 35, akaroora, ane vana vaviri. Amy Fisher aiva nemakore gumi nemaviri, uye kuchikoro chesekondari. Kwemwedzi inoverengeka yakatevera, vaviri vacho vakasimbisa rudo rwavo kune vemo motels.
Chikwata chaAmoy Chikuru Chakanga Chava Joey:
Maererano naAmy, Joey aigara achitaura nezvokusafara kwake mumuchato wake. Amy, mukudzoka, akaudzawo zviitiko zvehupenyu hwake kwaari. Ukama hwaive huchienda hwakasimba, asi dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwaAmy dzakanga dzotanga kuzarura. Akanga achiita zvakaipa kuchikoro uye akatadza kufarira shamwari neshamwari dzake.
Ainyanya kufunga nezve Joey. Pakazosvika August 1991, Amy akanga asiri mubasa uye aida mari. Zvakakanganisika, Joey akamukurudzira kuti ave akaperekedza kune imwe nzvimbo yekuperekedza basa. Amy akatora zano rake.
Mwedzi mumwe chete, Amy akanga achiita mari yakaisvonaka sehure. Nenguva yaNovember, pfungwa dzake pamusoro paJoey nemudzimai wake dzakanga dzave dzakashata.
Akanga ane godo naMaria Jo, uye aida kuti ave pamufananidzo. Mukugumburwa, akasarudza kupa Joey an ultimatum - iye kana mudzimai wake. Joey akasarudza mudzimai wake. Amy, achishamisika uye airwadzisa, akapedza ukama. Asingakwanisi kurarama nekuputika, akacheka mazamu ake, asi kucheka kwaiva kwakanyanya. Mushure mekuedza kuzviuraya, Amy akasarudza kuedza kudzokera kumararamiro ake chaiwo.
Amy Anotsungirira Kurambidza Maria Jo:
Amy akatanga kufambidzana na Paul Makely, muridzi wemudzimai wekuimba maitiro. Asi munaJanuary, Joey naAmy vakatanga zvakare nyaya yavo. Zvakakosha, Joey haana kushungurudzwa nekuve hupombwe, asi akatsamwa paakaona kuti aine ukama naMakely. Asingadi kuisa pangozi ukama huripo, Amy akatungamirira Joey kuti atende kuti Makely akanga asingakoshi kwaari. Akatangawo kugara pamusoro pekutsvaira Maria Jo, uyo waaifunga semugove mukuru kune ukama hwake naJoey.
Chisarudzo Chokuuraya Maria Jo:
Musi waMay 13, 1992, anenge gore kubva panguva yokutanga yaakasangana naJoey, Amy akafunga, kamwechete uye zvachose, kubvisa Maria Jo. Akanzwa kuti Peter Guagenti aigona kumubatsira kuwana pfuti. Amy akati panguva iyoyo manheru iwayo, akaudza chirongwa chake naJoey, uye kuti akamubatsira nemazano ekuti angapfura sei mudzimai wake.
Musi waMay 15, Amy akati Joey akaonana naye kuti aone kana aiva nepfuti, iyo panguva iyoyo iye haana. Joey akamboramba kuramba achiziva nezvemazano aAmy kuuraya Maria Jo.
Amy Anotsvaga Maria Jo Buttafuoco:
Amy akabata Guagenti, uye chirongwa chokuuraya Maria Jo chakagadzirirwa. Musi waMay 17, iye naGuagenti vakatsiva mahwendefa ake emakiti ane maviri ayo Amy akanga abiba. Pa11: 00 mangwanani, naGuagenti kutyaira, ivo vaviri vakaenda kumba kweButtafuoco. Akashongedzwa neTitan .25 pfuti-pfuti-pfuti, Amy akatarisana naMaria Jo pavhara rake. Mushure mokukurukurirana pfupi, Amy akarova Maria Jo nemupfu, zvichiita kuti awire pasi. Paakanga achiri pasi, Amy akamupfura mumusoro.
Mary Jo Kurwisana Kuramba Ari Muviri:
Vavakidzani vakakurumidza kuuya kuna Mary Jo's aid. Mikana yake yokupona yaiva yakaipa. Mushure memaawa akawanda mukuvhiyiwa, Mary Jo mamiriro ake akadzikama, asi murwi uyu wakaramba uchigara mumusoro wake.
Joey akaudza mapurisa kuti Pauro Makely uye musikana waPaul, Amy, vangangodaro vakabatanidzwa mukupfura. Akati akange apa mazano kuna Amy nezvekusabhadhara chikwereti chemukomana wake, uye Makely, paakawana, aida kutsiva. Mapurisa akahadzika nyaya yake uye akafungidzira kuti aivanda chimwe chinhu.
Mary Jo Anotsanangura Amy semuvengi Wake:
Musi waMay 20, Mary Jo aiziva uye achipa mapurisa zvinyorwa zvekupfura. Joey, achiziva mapurisa ari kuswedera pedyo nechokwadi pamusoro penyaya yake yerudo, akaudza mapurisa kuti shooter angave aiva Amy Fisher. Mary Jo akacherechedza Amy semudhiriri kubva pamufananidzo waakaratidzwa. Mapurisa, asingakwanisi kuwana Amy, akakumbira Joey kuti ataure naye uye aone kuti aivepi. Akaramba achida. Musi waMay 21, mapurisa akamusunga Amy Fisher, pamba pake, nokuda kwekupfurirwa kwaMaria Jo Buttafuoco.
I "Long Island Lolita":
Amy akaudza mapurisa kuti kudhonza kwaiva kukanganisa - kuti pfuti yakabudiswa paakarova Mary Jo pamusoro. Kuziva Joey akanga atendeuka kwaari, akavataurirawo kuti Joey akanga amupa pfuti uye kuti avo vaviri vaiva vanoda - mutemo Joey wakaramba.
Musi waMay 29, Amy akanyora "asina mhosva" kune mhosva dzekuedza kuuraya mune yechipiri chechipiri, kubatwa kwehondo, kuuraya, uye kushandiswa kwechibvumirano chemuti.
Imwe mitambo yemarudzi inonzi Amy "Long Island Lolita." Shamwari neveimbova vashandi vakaparadza zvakasara pakuvimbika kwake nokutengesa mavhidhiyo emakambani akave akafananidzirwa muchivande naye, uye achibvumira kubvunzurudza umo vaizoshandura unhu hwake.
Bhiri reAmy rakagadzirirwa $ 2 mamiriyoni, rakakwirira kupfuura mamwe ose munhoroondo yeNassau County, Long Island. Pashure pemwedzi miviri mujeri, bhaari yaAmy yakachengetedzwa, asi mushure mokunge abvumirana kusiya nyaya yenyaya yake kune KLM Productions.
Gweta rake ndokubva aronga chibvumirano chekuti Amy aizotora kwemakore gumi namashanu ari mujeri mukutsinhana kwehupupuriro pamusoro pe Joey.
Amy Fisher akagamuchira chibvumirano chekumbira uye akatongerwa zvakakodzera. Guagenti akapedza mwedzi mitanhatu ari mujeri nekuda kwekupa Amy pfuti.
Muna 1993, dare rakapa Joey mhosva yekubatwa chibharo. Amy akapupurira nezvehukama hwavo hwepabonde. Joey akatongerwa mhosva dzekunyengedzera, kubata, uye kuisa pangozi kugara kwevana vaduku. Nehupupuriro huri pamusoro pake, Joey akapika kuti ane mhosva kune imwe nhamba yekubata chibharo. Akashanda mwedzi mitanhatu mujeri.
Amy akabudiswa kubva mujeri mushure memakore manomwe. Muna 2003, akaroora nemurume waakasangana naye paIndaneti, uyo ane makore makumi maviri nemaviri kupfuura iye, uye baba vemwanakomana wavo.
Iye zvino munyori wenyaya yeLong Island Press, akakunda Media Award yeColumn-News kubva kuSosaiti yeZvino Journalists muna 2004. Bhuku rake idzva, "Kana Ini Knew Ipapo ..." iri kunze, uye anotarisira kuti ichabatsira vamwe .
Mhedziso: Long Island Press uye "Amy Fisher: My Story"
Vakatambudzi veMupata Rankins naEric Glover
Nheyo dze 'Nzira Inokosha'
Ashley Pond Biography
Nhoroondo yaBrian David Mitchell uye Kidnapping yaElzabeth Smart
Anouraya Micaela Costanzo
Profile of Richard Kuklinski
Karla Homolka naPauro Bernardo Photo Gallery
Kushandura Kudiwa kweChirve
Chinhu Chaicho uye Kwete "Chisiri"
5 Kuchinja HBO Yakaitwa ku "Vana Vaduku Vashoma" Inokuvadza Nyaya
Munhu Wega Ndezvematongerwe enyika
Chii Chine Kushanyisa Kwenharaunda yeAllhill Skier?
10 Nhema maererano neSpain neVanhu Vanozvitaura
50 Zviito zveGermany zveGermany neSample Sentences
Residency Zvinoda Kuda Kongedzo
The Dinosaurs and Prehistoric Animals of Italy
Mhuka uye Nyama
Evhangeri yeBatman Halloween Zvipfeko
OU vs. U: French Kutumidzwa
Chikoro cheChikoro Chechiitiko
Ndinofanira Kuchengeta Kana Kuvhara Tire Here?
Kuenzanisa Latex neSilicone Shambi Mafia
Kuvaka J paMorgan Alban panzvimbo yeZapotec kuMexico
Spanish Cell Phone Mitsvuku
6 Top Atticus Finch Quotes Kubva Kuuraya Mockingbird naHarper Lee
Tafura Tennis - Mazuva Ano Chengetedzi Tactics yekutamba ne Long Long Pimples
Nzira Yokugadzirisa Nzvimbo Yako
Gabriel mukuru weMutumwa muMhoto
Unofanira Kutenga Gymnastics Shoes?
Kuvaka Muti Wemiti uye Plant Press
Tsanangudzo uye Mienzaniso yeKutadza Kunyoresa
Nei Kutendeuka kwaTit Turner Kwakaita Mhepo Yakachena Mhepo Inotyisa